Wararka ku saabsan LG: launches, mobiles, tablet, root and more - Androidsis | Androidsis
Markii aan tixraacno LG, xulasho ballaaran oo elektaronik tayo sare leh iyo aaladaha gacanta ayaa had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca. LG waa shirkad Kuuriyada Koonfureed ah, oo caan ku ah adduunka oo dhan soo saarista noocyo kala duwan oo elektaroonik ah. Shirkaddu waxay soo saartaa badeecado ay ka mid yihiin telefishannada, qalabka guryaha, iyo sidoo kale taleefannada casriga ah, kiniinno, iyo taleefannada casriga ah. Waa mid ka mid ah hogaamiyaasha adduunka ee qaybta elektaroniga.
Tayada ayaa ah astaamaha ugu muhiimsan ee alaabada LG, dhammaan qeybaheeda. Telefoonada calaamada Kuuriya waxay u taagan yihiin tayadooda sare, hal-abuurnimadooda joogtada ah iyo naqshadeynta wanaagsan, oo aad u soo jiidasho badan. Qaybtan waxaad ka heli doontaa dhammaan wararka, macluumaadka iyo dib u eegista taleefannada LG oo wata Android oo ah nidaamka hawlgalka.
LG waxay qorsheyneysaa inay xirto qeybta mobilada sababo la xiriira iibsadayaasha oo maqan
by Ignacio Sala samee Bilaha 4 .
Waxaan ka wada hadalnay dhowr bilood qorshayaasha mustaqbalka ee shirkadda Kuuriyada Koonfureed ee LG, oo ah shirkad bishii Janaayo ka dhawaajisay ...
Android 11 waxay u timaadaa LG V60 ThinQ 5G iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub
Android 11 waxay kusii socotaa taleefannada casriga ah. Markan waa wareegga LG V60 ThinQ 5G inuu helo ...
LG W41 waxaa lagu arkay sawirradiisii ​​ugu horreeyay: sifooyinka la sifeeyay
LG W31, oo ay weheliso nooc ka sii horumarsan, oo ah W31 +, ayaa laga bilaabay suuqa bishii Nofeembar ...
LG Velvet 5G wuxuu helayaa Android 11 Cusbooneysiin deggan
Waxaa la bilaabay bishii Maajo ee sanadkii hore iyada oo ah mid ka mid ah taleefannada la filayo shirkadda ee Snapdragon 765G laga ...
LG horeyba waxay u laheyd iibsade: Vingroup, isla shirkadii iibsatay BQ
Maalmo ka hor, waxaa bilaabmay in la faafiyo war sheegaya in soo saaraha Kuuriya ee LG uu qorsheynayo inuu iibiyo ...
LG waxay bixisaa tilmaamo ku saabsan ka bixitaanka suurtogalka ah ee suuqa casriga ah
by Manuel Ramirez samee Bilaha 7 .
Toddobaadyada soo socda LG waxay samayn kartaa go'aanka ugu dambeeya taasina waxay horseedi doontaa ka bixitaanka suuqa taleefannada casriga ah; inkasta oo…
LG Rollable mar horeba waa run oo shirkaddu waxay soo bandhigtay markii ugu horreysay
Haddii LG horeyba nooga yaabisay LG Wing-ga la yaabka leh, hadda waxay ku xardhan tahay iyadoo muujineysa LG Rollable sida ...
LG W11, LG W31 iyo LG W31 + ayaa lagu dhawaaqay inay yihiin sadexda shirkadood ee dhexdhexaadka ah
by DaniPlay samee Bilaha 9 .
LG waxay haysaa laxanka wanaagsan ee soo bandhigida taleefannada cusub sanadka 2020 kaasoo ay qorsheyneyso inay ku iibsato ...
LG Q52 waa nooc cusub oo gelitaan leh Helio P35 iyo Android 10
LG wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqayaa Q52 cusub, oo ah taleefan casri ah oo aad ugu eg LG K52 dhawaan la keenay, K52 ayaa yimid ...
LG K62 iyo LG K52 ayaa lagu dhawaaqay: Shaashadaha waaweyn iyo illaa afar kamaradood oo gadaal ah
by DaniPlay samee Bilaha 10 .
LG waxay soo saartay wadar ahaan laba taleefan oo cusub si loogu daro khadka K ee hoosta magacyada LG ...
LG Q31 waa taleefan heer cusub oo gelitaan leh oo leh Helio P22 iyo Android 10
LG ayaa ku dhawaaqday taleefan heer-gal ah oo cusub ka dib markii lagu dhawaaqay LG K31 ku dhowaad bil ka hor,…
4 dhibaatooyinka LG G6 iyo xalkooda
LG G6, taleefan runtii iska caabiya
Dhibaatooyinka LG G3: 2 Tabaha lagu hagaajinayo waxqabadka LG G3 oo aan xidid lahayn
Sida loo furo bootloader-ka LG, oo ansax u ah LG G5, LG G4 iyo LG V10
Waxaan horeyba uheysanay Soo Celin iyo Xidid LG G3 oo wata Android 6.0 Marshmallow
LG G5, tani waa qaybteeda xoogga leh ee lagu hagaajinayo maqalka
Nolosha batteriga ee LG V10 waxay ka mid tahay kuwa ugu xun telefoonnada loo yaqaan 'phablets'.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G3 International ilaa Android 6.0 rasmiga ah LG Poland Firmware
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2-keedii ugu dambeysay asalka Yurub ee D80220H
Isbarbardhigga Nexus 6 vs LG G3
LG G2: Sida loo soo Dejiyo loona rakibo Remote Degdeg ah oo ku saabsan nadiifinta Android AOSP Roms
Sida loo qaado shaashadda LG G3
Soo dejiso oo rakib kumbuyuutarka LG G3 (Kaliya loogu talagalay Root and Recovery users)